နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၂
အသံဖိုင်များကို " နံနက်ပိုင်း/ ညနေပိုင်း" တွင်ကလစ်နှိပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါ သည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကော်လံများရှိ အသံဖိုင်များကို သတင်းနားဆင်ရန် လင့်တွင် ကလစ်လုပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်
Labels: 2022, Audio, mm, ဇူလိုင်လ, အသံဖိုင်များ
ယနေ့သတင်း (အမြန်ရှာရန်) 2022 ဇူလိုင်လ
ရက်စွဲအလိုက် သတင်းများကို ဤနေရာတွင် ဝင်ရောက် ရှာဖွေနိုင်ပါ သည်။ ( ကလစ်လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုရန် )
ချင်းပြည်နယ်မှာ စစ်ကောင်စီက စစ်အင်အားတွေ တိုးချဲ့ ချထား ပြီးနောက် တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်လာ-BBC
ဥကရိထ စခန်း မကျသေး ဘူးလို့ စစ်ကောင်စီပြော -BBC
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချွတ်ယွင်းသေဆုံးတဲ့ ကလေး ၃၈၂ ယောက်ရှိနေပြီး ကလေးငယ် ၁၄၀၀ အကျဥ်းချခံထားရတယ်လို့ ကုလပြော -BBC
ဥကရိထတိုက်ပွဲ- ၆ ရက်မြောက်နေ့အထိ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ပြင်းထန်နေပြီး အရပ်သားတချို့ ပိတ်မိနေ -BBC
ဧရာဝတီသတင်းဌာန ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ဟောင်း ကိုဇော်ဇော်ကို စွဲချက်တင် အမိန့်ချ -BBC
စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အာဆီယံအထူးသံတွေ့ -BBC
ရှေ့နေသုံးဦး မန္တလေးမှာ ထပ်အဖမ်းခံရ -BBC
ဥကရိထစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ-ထိုင်းလေပိုင်နက်ထဲ စစ်ကောင်စီလေယာဥ်ဖြတ်ပျံလို့ ထိုင်းစစ်တပ် တိုက်လေယာဥ် ပျံတက်ခဲ့ရ -BBC
မင်းတပ်မြို့တိုက်ပွဲမှာ CDF ရဲဘော်သုံးယောက်၊ စစ်‌ကောင်စီဘက်က လေးယောက်၊ အရပ်သားတစ်ယောက် သေဆုံး -BBC
တရုတ်က မြန်မာကို ကူညီတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ၂ သန်းကို အာဆီယံ အထူးသံ လက်ခံ -BBC
ဆီထွက်သီးနှံအပါဝင် လယ်ယာထွက်ကုန်တွေကို လိုင်စင်ကြေးတိုးမြှင့်မယ် -BBC
မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ NUG နဲ့အတိအလင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပူးပေါင်းဖို့ ကြေးနီစီမံကိန်းဒေသခံ တွေ တောင်းဆို -BBC
ဥကရိထ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ - ရွာ ၅ ရွာက ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ -BBC
ဂျပန်ဘီယာ ကီရင်က သူ့ရှယ်ယာတွေကို မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆီ ရောင်းချမယ် -BBC
သဘောထားမတူတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကို အသက်အန္တရာယ်ပြုဖို့ စာရင်းပြုစုထားတာမျိုးမရှိလို့ NUG ရှင်းလင်း -BBC
ပင်းတယမြို့အထွက် ရဲကင်းစခန်းတစ်ခုပစ်ခတ်ခံရလို့ စစ်သားတစ်ဦးသေဆုံး -BBC
လန်ချန်း-မဲခေါင်အစည်းအဝေးကျင်းပမယ့် ပုဂံမှာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ် -BBC
ဥကရိထ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ -စစ်တပ်က လေယာဥ်ပစ်ကူ ပိုသုံးလာတယ်လို့ဆို -BBC
ဥကရစ်ထစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေ -BBC
အနာဂတ်ရေး စိုးရိမ်နေတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ဘဝ -VOA
စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အာဆီယံအထူးသံ တွေ့ဆုံ -VOA
နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချွန်လွှာအရ မြန်မာလုပ်သား ၂,၀၀၀ နီးပါး ထိုင်းရောက်ရှိ -VOA
Kirin လုပ်ငန်းအားလုံး တပ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရောင်းချမည် -VOA
ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုဇော်ဇော် အာဏာဖီဆန်လာအောင်လုပ်မှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခံရ-RFA
ဥကရစ်ထတိုက်ပွဲ စစ်ကောင်စီဘက်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပိုများလာနိုင်-RFA
မြန်မာစစ်တပ် လေတပ်စခန်းတွေ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်ကြက်ထား-RFA
မြန်မာမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ တိုးပွားလာနေတဲ့အပေါ် ကုလ သတိပေး-RFA
ဝက်လက်မြို့က ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ ခုနစ်ဦး CDM ဝင်-RFA
စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝေဟင်ကျူးကျော်မှု ထိုင်းအစိုးရ သတိပေး-RFA
ဒီးမော့ဆိုက ဒုက္ခသည်ရှစ်သောင်းအတွက် မိုးကာတွေလိုအပ် -RFA
ရခိုင်မှာ ရေကြောင်းသွားလာရေး တစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ခံထားရတာကြောင့် ဒေသခံတွေခက်ခဲ -RFA
ကချင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး နေအိမ် ချိပ်ပိတ်ခံရ -RFA
တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကတစ်ဆင့် မြန်မာကို ထောက်ပံ့ -RFA
ရွှေဘိုမှာ အမျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင် PDF ကိုးဦး သတ်ဖြတ်ခံရ -RFA
မြ၀တီမြို့ ဥကရစ်ထစခန်း နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ ဆက်ပြင်းထန်နေပြီး ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိ -RFA
ဂျပန်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းရှယ်ယာများ ဦးပိုင်ကို ပြန်လည်ရောင်းချမည် -RFA
တီးတိန်မြို့မှာ ပရဟိတလူငယ်နှစ်ဦး အဖမ်းခံရ -RFA
တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ၁၃၀ ကျော် ဖျက်ဆီးခံရ -RFA
ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ရွာတွေအနီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ တပ်မစွဲဖို့ ဒေသခံတွေ တောင်းဆို -RFA
ဘီးလင်း NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖမ်းခံရပြီး ပျောက်နေ -RFA
ဘိုကလေးမြို့မှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ ကုလဝန်ထမ်းကို ဖျာပုံထောင်ပို့ -RFA
မင်းတပ် မဒပ်ရွာ လက်နက်ကြီးကြောင့် ကလေးတစ်ဦး သေဆုံး -RFA
စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အရေးပေါ် ကယ်တင်ဖို့ ကုလသတိပေး -RFA
စစ်တွေမြို့ ကုန်တန်းရက်ကွက်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး ၈ရက်ကြာသည်အထိ သတင်းအစအနမရ ဘဲ ပျောက်ဆုံးနေ -Narinjara
ပလက်ဝမှ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးနှင့် ဒေသခံတစ်ဦးတို့ကို နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် အမှုဖွင့် -Narinjara
ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်လွှတ်လာသည့်ဆရာမ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရဟုဆို -Narinjara
ဆိုးဝါးစွာပြိုပျက်နေသည့် ရသေ့တောင်ကမ်းနားလမ်းကို ၁ နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင် ပြုပြင်ပေးမှုမရှိသေး -Narinjara
အဘောင်သားကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွာသားနှစ်ဦးတို့ကို ၁လနီးပါးတရားရုံးမတင်ဘဲ စစ်ကောင်စီတပ်က ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထား -Narinjara
ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သား ၂၀ ကျော်ကျဆုံး -Mizzima
ဖားကန့်မြို့နယ် လီဒိုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အင်အား ၁၀၀ခန့်ပါ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို KIA နှင့် KPDF တို့က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက် -Mizzima
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မော်တော်ပီကယ်ရဲကင်းအား ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ် -Mizzima
ပေါက်ကားကျေးရွာ ပျူစောထီးအတွင်းရေးမှူး ဒုခေါင်းဆောင်ကို ဒေသကာကွယ်ရေးတပ် ရှင်းလင်း -Mizzima
ရဲစခန်းအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ၍ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၆ ဉီးသေဆုံး -Mizzima
အိုးဘိုထောင်၌ အမှုရင်ဆိုင်ဆဲ အမျိုးသမီး နိုင်/ကျဉ်းများ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရ - Irrawaddy
ဥကရစ်ထတိုက်ပွဲ ရက်ကြာသည့်နှင့်အမျှ ထိုင်းဘက်ထွက်ပြေးသူ ၁၀၀၀ခန့်ရှိလာ-Irrawaddy
စစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ဆွေးနွေးအပြီး မြန်မာတိုက်လေယာဉ်များ ထိုင်းလေပိုင်နက်သို့ ဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွား-Irrawaddy
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် စိုင်းစစ်အောင် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ရက် ၅၀ နီးပါးထိ အဆက်အသွယ်မရ-DVB
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် UG လူငယ်များကို စစ်ကောင်စီက ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေ-DVB
ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင် စနိုက်ပါဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးသေဆုံး -DVB
အေအေအတွက် ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်ပေးမှုဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၁ ဦးကို စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီး -DVB
စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေသဖြင့် ဂန့်ဂေါ-ကလေးလမ်းပိုင်း မသုံးကြရန် PDF သတိပေး -DVB
စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်ကျဆုံးခဲ့သည့် မင်းတပ်က ၁၄ နှစ်သားအပါအဝင် ကျဆုံး သူပေါင်း ၂၀၄၀ ရှိလာ -DVB
ရေး-သံဖြူဇရပ်လမ်းတွင် ညပိုင်းသွားလာခြင်းမပြုရန် တောင်ညိုပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ သတိပေး -DVB
တိုက်လေယာဉ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စ မြန်မာဘက်က တောင်းပန်သဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပြီးဖြစ်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီး ချုပ်ပြော -DVB
လွိုင်ကော်-လောပိတလမ်းတွင် စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တစီး တိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၄ ဦး သေဆုံး -DVB
မြို့ပြပြောက်ကျားသူရဲကောင်းများအတွက် “နန်းထိုက်အောင်စစ်ဆင်ရေး” ရန်ပုံငွေ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင် -DVB
လောင်းလုံးတွင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆက်လက်ဆန္ဒပြ-DVB
စစ်တွေမြို့တွင် Wifi တပ်ဆင်ရာမှ ဓာတ်လိုက်ပြီး ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦး ဆေးရုံတင်ထားရ -DVB
ရွာငံအခြေစိုက် YPDF ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာ-DVB
ထုံးဘိုလေးကျေးရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီး၊ ပြည်သူ့ပိုင်ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်-DVB
ဗန်းမောက်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီဘက်က ၂၀ ကျော်သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးကုပေးထားဟု NUG ထုတ်ပြန်-DVB
စစ်ခေါင်းဆောင်နေအိမ်ရောင်းချမှု အစုရှယ်ယာ ၂၀၀၀ ကျော်ထိ ဝယ်ယူသူရှိ-DVB
ဟောင်ကောင်ကို ဗြိတိန်က တရုတ်နိုင်ငံလက်ထဲ လွှဲပြောင်းပေးတာ ၂၅ နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ်-BBC
ထိုင်းဘက်ကိုကျော်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီလေယာဉ်နဲ့ ဥကရစ်ထကုန်း အရေးပါပုံတွေ-BBC
အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင် ဘာသာရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပွား-BBC
ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဒူတာတေးအစိုးရကို ဝေဖန်တဲ့ ရက်ပလာသတင်းဌာနပိတ်ပင်ဖို့ အမိန့်ထုတ်-BBC
ထိုင်းလေပိုင်နက်ထဲ မြန်မာတိုက်လေယာဉ် ဝင်ရောက် -VOA
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် အဆင့်အတန်းကျဆင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲ မြန်မာပါဝင် -VOA
ရုရှားတပ်တွေ ယူကရိန်း မြွေကျွန်းပေါ်က ဆုတ်ခွာ -VOA
ဆူဒန်စစ်အာဏာသိမ်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ နှိမ်နင်းမှု ၇ ဦးထက်မနည်းသေ -VOA
“ နေတိုးနဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်ရင် ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုရှိမယ်” နေတိုးအကြီးအကဲသတိပေး -VOA
ရေမြေခြားမှ ရုပ်ပုံလွှာ (ရခိုင်ရိုးရာ ရှင်ပြုရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ) -VOA
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ကလေးငယ်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ဗြိတိန်ကန့်ကွက် -RFA
လန်ချန်း - မဲခေါင် အစည်းအဝေး ကျင်းပမယ့် ပုဂံမှာ လုံခြုံရေးတင်းကျပ် -RFA
ဆွီဒင်နဲ့ ဖင်လန်တို့ရဲ့ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားမှု ရုရှားအတွက်ပြဿနာမရှိကြောင်း ပူတင်ပြော -Mizzima
တရုတ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသလို ဈေးကွက်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေသော ကျင့်ဝတ်များကို ဖြေရှင်းရန် စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံများ သဘောတူ -Mizzima
တရုတ်ဆင်ဆာအဖွဲ့က ပါတီအကြီးတန်းအရာရှိ၏ အထင်မြင်လွဲမှားစေသော ကိုဗစ်ဆိုင်ရာ ရေးသားချက်ကို အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ဖယ်ရှား -Mizzima
ပါကစ္စတန်နှင့် အီရန် ဆက်ဆံရေး ဆက်လက်ယိုယွင်းလာ -Mizima
ယူကရိန်း၏ အိုဒက်ဆာဒေသရှိ တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ ဒုံးကျည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး -Mizzima
မွမ်ဘိုင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ကြိုးကိုင်သူကို ပါကစ္စတန်က တိတ်တဆိတ် ကြားနာစစ်ဆေးပြီး ထောင် ဒဏ်ချမှတ် -Mizzima
အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မောရိရှဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေရန် ဆွေးနွေး -Mizzima
ပါကစ္စတန်တွင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုအပေါ် အစိုးရက ပိတ်ပင်ပြီးနောက် ဆိပ်ကမ်းများ၌ ကုန်သေတ္တာ ရာပေါင်းများစွာ စုပုံနေ -Mizzima
ထိုင်းလေပိုင်နက်ကျူးကျော်မှု မြန်မာစစ်တပ် တောင်းပန်- Irrawaddy
Labels: 2022, mm, ဇူလိုင်လ, ယနေ့သတင်း, အမြန်ရှာရန်
ယနေ့သတင်းစာများ ( ကြေးမုံ+ မြန်မာ့အလင်း ) ဇူလိုင်လ ၊၂၀၂၂
၂၀၂၂ ခု ဇူလိုင်လ၊မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
Labels: 2022, mm, ကြေးမုံ, ဇူလိုင်လ, မြန်မာ့အလင်း, သတင်းစာ
ယနေ့သတင်း (အမြန်ရှာရန်) 2022 ဇွန်လ
ဂျပန်ဘီယာ ကီရင်က သူ့ရှယ်ယာတွေကို မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆီ ရောင်းချမယ်-BBC
သဘောထားမတူတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကို အသက်အန္တရာယ်ပြုဖို့ စာရင်းပြုစုထားတာမျိုးမရှိလို့ NUG ရှင်းလင်း-BBC
ပင်းတယမြို့အထွက် ရဲကင်းစခန်းတစ်ခုပစ်ခတ်ခံရလို့ စစ်သားတစ်ဦးသေဆုံး-BBC
လန်ချန်း-မဲခေါင်အစည်းအဝေးကျင်းပမယ့် ပုဂံမှာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်-BBC
ဥကရိထ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ -စစ်တပ်က လေယာဥ်ပစ်ကူ ပိုသုံးလာတယ်လို့ဆို-BBC
မြန်မာအိမ်အကူကို နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူရဲ့ ထောင်နှစ် ၃၀ ပြစ်ဒဏ်ကို စင်္ကာပူ အယူခံခုံရုံး အတည်ပြု-BBC
တရားမဝင် ဝင်ရောက်သူ လူပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ကို ထိုင်းကပြန်လွှဲပေး-BBC
မြန်မာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့ ၇၀၀ နီးပါး ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို ဝိုင်းဝန်း တောင်းဆို-BBC
စစ်ရဲ့သက်ရောက်မှု ကလေးသူငယ်တွေအပေါ် အများဆုံး ကျရောက်နေ-BBC
ဥကရိထ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ - လက်နက်မှန်တဲ့အရပ်သားအချို့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ ဆေးကုနေရ -BBC
အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့ အာဆီယံအထူးသံနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိ -BBC
ပူတာအိုက ရဝမ်လူငယ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ထောင် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခံရ -BBC
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရောက် မင်းသားရဲ့ တော်လှန်ရေး -BBC
လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၁၆၀ ကျော် ထိုင်းကနေပြန်ပို့ -VOA
NCA လက်မှတ်ထိုး ၇ ဖွဲ့ အာဆီယံအထူးသံနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိ -VOA
စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အရေးပေါ် ကယ်တင်ဖို့ ကုလသတိပေး- RFA
မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုမှာ စစ်တပ် ပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ် - RFA
တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၆ဝ ကျော်ကို နေရပ်ပြန်ပို့- RFA
NLD လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ဝင်းမြမြ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခံရ- RFA
အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တချို့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံမည် - RFA
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းအနီး လူကိုးဦးထက်မနည်း အသတ်ခံထားရ- RFA
ရခိုင်မှာ အရပ်သား ၄၀ ခန့် အဖမ်းခံထားရကြောင်း AA ပြော-RFA
အာဆီယံအထူးသံ ဒုတိယမြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်စတင်-RFA
စစ်တပ်က အရာရှိ၊ စစ်သည် ၁၈ ဦး NUG ထံမှာ ခိုလှုံလာကြောင်း ထုတ်ပြန်-RFA
စစ်တပ်နဲ့ KNU မြဝတီမြို့အနီး တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများ- RFA
ယင်းမာပင်မြို့ လည်ငေါက်ရွာ အိမ်တစ်ရာနီးပါး မီးရှို့ခံရ-RFA
ကျောက်ကြီးနဲ့ မုန်းမြို့မှာ တိုက်ပွဲကြောင့် ရွာသား ၁၆,၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးနေရ -RFA
မြောင်မြို့ပေါ်တွင် ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရာ စကစတပ်သား ၇ ဦး သေဆုံး -Mizzima
ဖားကန့်မြို့တွင် KIA၊ PDF၊ NUG ထောက်ခံပွဲနှင့် စစ်ကောင်စီအမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရေးသပိတ်ပြုလုပ် -Mizzima
အလုံမြို့နယ်ရှိ Sky Way Club & KTV မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါး-Mizzima
စစ်တွေမြို့ ကုန်တန်းရက်ကွက်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး ၈ရက်ကြာသည်အထိ သတင်းအစအန မရဘဲ ပျောက်ဆုံးနေ - Narinjara
ပလက်ဝမှ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးနှင့် ဒေသခံတစ်ဦးတို့ကို နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် အမှုဖွင့် - Narinjara
ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်လွှတ်လာသည့်ဆရာမ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရဟုဆို - Narinjara
ဆိုးဝါးစွာပြိုပျက်နေသည့် ရသေ့တောင်ကမ်းနားလမ်းကို ၁ နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင် ပြုပြင်ပေးမှုမရှိသေး - Narinjara
အဘောင်သားကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွာသားနှစ်ဦးတို့ကို ၁လနီးပါးတရားရုံးမတင်ဘဲ စစ်ကောင်စီတပ် ကဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထား - Narinjara
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်က ဝင်ရောက်လာသည့် ရခိုင်လူမျိုး၆ ဦး မောင်တောစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုတွင် ဖမ်းဆီးခံရ - Narinjara
ကျောက်တော်တွင် စစ်ဘေးရှောင်တစ်ချို့ အရေပြားရောဂါဖြစ်ပွားနေ -DMG
ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ကန်ကျောက်ခံရသည့် ကျောက်ဆိပ်ရွာသားများ အကျဉ်းထောင်တွင် နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ ချုပ်နှောင်ခံထားရပြီဖြစ်သော်လည်း အမိန့်မချသေး-DMG
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ တူးနေသည့် ဟန်လင်းဇုန်အနီး စစ်ကောင်စီတပ် ချထား- Irrawaddy
စစ်ကောင်စီက ရေကြောင်းသွားလာခြင်းကို ပိတ်ထား၍ ရခိုင်ပြည်သူတို့ အခက်ကြုံ- Irrawaddy
ပို့ကုန်ရငွေ စာရင်းရှင်းရန် ကျန်ရှိကုမ္ပဏီများကို စစ်ကောင်စီ ပြန်တောင်းနေ- Irrawaddy
အာဏာအားပြိုင်မှုကြားက ရခိုင် လူဖမ်းပွဲ- Irrawaddy
ဥကရစ်ထတိုက်ပွဲ ၄ ရက်မြောက်နေ့ထိ ပြင်းထန်နေ - Irrawaddy
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှ လယ်ယာထွက်ကုန် တင်ပို့မှုအပေါ် လိုင်စင်ကြေး တိုးမြှင့်-Irrawaddy
လေကြောင်းဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဥကရစ်ထ စစ်‌ဘေးရှောင်ပြည်သူများ ထပ်မံတိမ်းရှောင်- DVB
နယ်စပ်ရောက် ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် CDM ဝန်ထမ်းများ ပြန်ဝင်ရောက်ရေး မြန်မာနှင့် ထိုင်းစစ်တပ် ဆွေးနွေး-DVB
သထုံတိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော် ၂ ဦး ကျဆုံး -DVB
ဥကရစ်ထတပ်စခန်းကို စစ်ကူလာသည့် စစ်ကောင်စီတပ် ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး အကျအဆုံးများ -DVB
တရက်တည်း စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ နီးပါးသေဆုံးဟု NUG ထုတ်ပြန် -DVB
မိုးတွင်းကာလ အသုံးပြုမည့် လှေဝယ်ယူနိုင်ရန် ကလေး PDF အလှူငွေကောက်ခံ-DVB
ပင်းတယ-ရွာငံသွား တောင်ပေါ်ကြီးလမ်းပိုင်း ယာယီပိတ်ထားဟု ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ ကြေညာ-DVB
မြန်မာ့ပြောင်း ပြည်ပတင်ပို့မှု ရပ်တန့်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီး စျေးဆက်တိုက်ကျဆင်း- DVB
ညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ၁၆,၀၀၀ ကျော် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်ကြုံ -DVB
လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင် နေ့စဉ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းနေသဖြင့် ကျောင်းသားများ အိမ်ပြန်နောက်ကျ -DVB
အာဏာသိမ်းကာလ ၁ နှစ်ခွဲခန့်အကြာ စစ်အုပ်စုက ပြည်သူ ၂,၀၄၀ နီးပါးကို သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၁၄,၀၀၀ ကျော်ရှိ- DVB
မွန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံ ရွေးကောက်ပွဲအမှုမှ လွတ်မြောက် - DVB
နေတိုးထိပ်သီး အစည်းအဝေး- စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့အတွက် စိန်ခေါ်ချက် ငါးခု-BBC
မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာ ကြိုးပမ်းမှုတွေ မလုံလောက် (ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်) -VOA
ရုရှားနဲ့ တရုတ်အပေါ် ပစ်မှတ်ထားမယ့် မဟာဗျုဟာသစ် နေတိုးအဖွဲ့အတည်ပြု -VOA
ဟိန္ဒူတဦး အသတ်ခံရမှုကြောင့် အိန္ဒိယမှာ တင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက် -VOA
ထိုင်းရောက် ဝီဂါမွတ်ဆလင်တွေ တရုတ်နိုင်ငံပြန်မပို့ရေး လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ တောင်းဆို -VOA
ရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေးများ အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ ကြားနာစစ်ဆေးခံမည်-VOA (TK)
လက်ရှိကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့စိန်ခေါ်ချက်များ နေတိုးခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေး -VOA
သီရိလကာင်္ လောင်စာဆီ ပြတ်တောက် -VOA
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေရဲ့ခရီးစဉ် အကျိုးရလဒ်မမြင်လို့ ဝေဖန်ကြ-RFA
ကြွေးမြီပျက်ကွက်သည့် သီရိလင်္ကာ၏ စီးပွားရေး ပထမသုံးလပတ်၌ ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျုံ့-Mizzima
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပုဂံ လာမည် - Irrawaddy
Labels: 2022, mm, ဇွန်လ, ယနေ့သတင်း, အမြန်ရှာရန်
နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဇွန်လ၊ ၂၀၂၂
Labels: 2022, Audio, mm, ဇွန်လ, အသံဖိုင်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တွင်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်သည် တောတောင်သဘာဝအလှတရားများ၊ ဘုရားပုထိုး စေတီများနှင့် သဘာဝသယံတများ ပေါကြွယ်ဝသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဝေးကလှမ်းမျှော်ကြည့်လျှင် နေ ချင် စဖွယ်ဒေသတစ်ခုဟု ထင်မြင်နိုင်သော်လည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ ပိတ်လှောင်ခံထားရသူများအတွက် မွန်း ကျပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ကာ ဤဒေသက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ချင်သူများရှိနေသည်။
Labels: 2022, mm, ဆောင်းပါး, အနောက်ဘက်က အော်သံ
၂၀၂၂ ခု ဇွန်လ၊မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
Labels: 2022, mm, ကြေးမုံ, ဇွန်လ, မြန်မာ့အလင်း, သတင်းစာ
ရှင်သန်နေထိုင်ရေးအတွက် အသက်စွန့်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေဘဝ
၂၉ မေ၊ ၂၀၂၂
FILE PHOTO: Rohingya refugees continue their journey after crossing the Myanmar-Bangladesh border in Palong Khali, Bangladesh, November 1, 2017. REUTERS/Hannah McKay/File Photo FROM THE FILES - 3RD ANNIVERSARY OF ROHINGYA MUSLIM EXODUS FROM MYANMAR
ဒီသီတင်းပတ်ထဲ ပင်လယ်ပြင်ထဲ စက်လှေမှောက်ပြီး ကလေးငယ်လေးတွေအပါအဝင် လှေစီးပြေး ရိုဟင်ဂျာ တဒါဇင်ကျော် ပင်လယ်ပြင်ထဲ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းတုန်လှုပ်ရပါကြောင်း ကုလမဟာမင်းကြီးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုရိုဟင်ဂျာတွေ ပင်လယ်ထဲ အသက်ဆုံးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ မကြာခဏကြုံရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ မျှော်လင့်ချက် အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လွတ်မြောက်ရေး ပင်လယ်ပြင်အပါအဝင် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ထွက်ပေါက်လမ်းရှာခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အသက်နဲ့ရင်း ဘဝတွေပေးဆပ်ခဲ့ကြရတဲ့ အခက်အခဲ ဒုက္ခစိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်း ရိုဟင်ဂျာအရေး ကူညီပေးနေသူတွေ ဒုက္ခသည်တချို့ကို မဆုမွန်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2022, Artical, Boat People, Filippo Grandi, Indrika Ratwatte, mm, UNHCR, ရိုဟင်ဂျာ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် စိစစ်ခွင့်ပြုဖို့ ထိုင်းအစိုးရ ကို HRW တောင်းဆို
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဇွန် ၄ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာများ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေ အန္တရာယ်များလှတဲ့ ရေလမ်းခရီးကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံက ကျွန်းတစ်ခုမှာ သောင်တင်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအုပ်စုတစ်ခုကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ထိုင်းအစိုးရကို လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ (HRW) က အင်္ဂါနေ့မှာ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ခိုတောင်ကျွန်းမှာ သောင်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၅၉ ဦးကို ထိုင်းရေတပ်က စနေနေ့မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အမျိုးသား ၃၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၃ ဦး၊ ယောကျာ်းလေး ၃ ဦး၊ မိန်းကလေး ၂ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ခေါ်လာတဲ့ စက်လှေကနေ မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက် ပြီဆိုပြီး ခိုတောင်ကျွန်းပေါ်မှာ ထားပစ်ခဲ့တာလို့ ထိုင်းရေတပ်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
HRW ကတော့ - ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြန်ပို့ဖို့မလုပ်ခင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် စိစစ်နိုင်ရေး ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
Labels: 2022, Boat People, HRW, mm, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ် မှု နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြဿနာဖြစ်
၂၆ ဇွန်၊ ၂၀၂၂
ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ စုဝေးဆန္ဒပြနေပုံ။ (ဓာတ်ပုံ ကိုအောင်မြိုင်-ကုတုပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် (၇))
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှု အတွက် တာဝန်ခံမှု ရှိရေးဟာ နိုင်ငံတကာ နဲ့ အာဆီယန် ရဲ့ ပြဿနာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဗွီအိုအေဘင်္ဂလာဌာနနဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ သံအမတ်ကြီးက ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့က အခုလို ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်နိုင်မယ့် အခြေအနေ ဖန်တီးရေး၊ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် တာဝန်ခံမှုရှိ ရေးကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့တကွ နိုင်ငံတကာနဲ့ အမေရိကန်က ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်း၊ ဒါဟာ အာ ဆီယန်ရဲ့ အရေးကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ သံအမတ်ကြီးက ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူး လွန် ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု မြောက်တယ်လို့ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာပြည် ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်နဲ့ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ်က အတူတကွ လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သံအမတ်ကြီးက ဖြေကြားခဲ့ တာပါ။
Labels: 2022, mm, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပို့ပြန်ရေး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အတွင်းဝန်အဆင့် အွန်လိုင်းက ဆွေးနွေး
၁၅ ဇွန်၊ ၂၀၂၂
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ပ ဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပစဉ်။ (၁၄-၆-၂၀၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးအစည်းအဝေးကို မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန အကြီးတန်းအရာရှိတွေ အင်္ဂါနေ့က အွန်လိုင်းကနေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အတွင်းဝန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦး ချမ်းအေးနဲ့ မစ္စတာ မာစွတ် ဘင် မိုမမ် (Mr. Masud Bin Momen) တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်က ပြောပါတယ်။
Labels: 2022, mm, နေရပ်ပို့ပြန်ရေး, မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, အတွင်းဝန်အဆင့်
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် 'လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု' လုပ်ဆောင်နေ- အစီရင်ခံစာ
ဇွန် ၀၉၊ ၂၀၂၂
( ဘာသာပြန် )
ထောက်ခံအားပေးရေးအဖွဲ့ Fortify Rights ၏အဆိုအရ၊ ပြည်နယ်၏ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ဆိုး ရွားစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၏ အ တိတ် အပိုင်းများကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် မြန်မာစစ် အစိုးရက အထောက်အထား စာရွက်စာ တမ်းများ ကဲ့သို့ သော စီမံခန့်ခွဲရေးအစီအမံများကို အသုံးပြုနေသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ သည်။
ရိုဟင်ဂျာများ အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုတွင် အပေါ် မြန်မာ အစိုးရ၏ ပြုမူဆက်ဆံမှုသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ရဝမ်ဒါ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟု ထင်ဟပ်စေသည်ဟု ထောက်ခံ အားပေးရေးအဖွဲ့ Fortify Rights က ဆိုသည်။ ရိုဟင်ဂျာ အသိုင်းအဝိုင်းအား လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုသည် ကြီးမားစွာ ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း “လူမျိုး တုံးသတ်ဖြတ်မှု” ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေပါသည်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက် နှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြချက် တစ် ခုအရ သိရသည်။
Labels: Article, fortify Rights, Genocide, mm, Myanmar, Report, အစီရင်ခံစာ
Commander SHOBBIR HUSSEIN [1941-1998]
ရှောဗ္ဗီးရ်ဟူစိန်သည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဖွီမာလီကျေးရွာရှိ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည်။ ဖခင်မှာ ကျောင်းဆရာ အဟ်မဒူရာမာန်ဖြစ်ပြီး မိခင်မှာ ဒေါ်ဆော်လီမာခါတွန် ဖြစ်သည်။ ရှော်ဗ္ဗီရ်ဟူစိန်းသည် အခြေခံပညာကို ဇာတိရွာ၌ သင်ယူခဲ့ပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို ဘူးသီးတောင်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် စစ်တွေမြို့ အထက်တန်းကျောင်းမှ သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုတွင် စစ်တွေမြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၀-တန်းအောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျောက်ဖြူ ကော် လိပ်၌ ဥပစာတန်း သင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကျောင်း၌ ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဖြင့် ဘီအေဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၂-၆၅ ထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စစ်လေ့ကျင့် ရေးသင်တန်း (Ragoon University Crops- UTC) တက်ရောက်ကာ အခြေခံစစ်ပညာကိုလဲ သင်ယူခဲ့သည်။
Labels: Biography, en, mm, SHOBBIR HUSSEIN, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
NEWER UNION- Greater Albania - အိပ်မက် ဒါမှမဟုတ် အိပ်မက်ဆိုးလား။
ရေးသားသူ BALK သတင်း
ကိုဆိုဗိုပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်း (KFOS) နှင့် အယ်လ်ဘေးနီးယားပွင့် လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်း (OSFA) တို့သည် နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးရှိ လူများကို အကျိုးသက်ရောက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသည့် ကိစ္စ ရပ် များကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း အာရုံစိုက်ထားသည်။ နှစ်နိုင်ငံ ပေါင်းစည်းရေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့က တောင်းဆိုတယ်။ ရလဒ်မှာ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲခေါ်မည်ဆိုပါက အယ်လ်ဘေးနီးယားတွင် ဖြေဆို သူ ၇၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကိုဆိုဗိုတွင် ၆၃.၉ ရာခိုင်နှုန်းက နှစ်နိုင်ငံ ပေါင်းစည်းရန် မဲပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ဆန့် ကျင်သူများသည် ပြည်နယ်နှစ်ခုကို သီးခြားပြည်နယ်များအဖြစ် ပိုကောင်းသည်ဟု ထင်ရသည့် အဓိက အ ကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း Nostalgic က ၎င်း၏ဘလော့ဂ် The Stories of the Balkans တွင် ရေးသားခဲ့ သည်။ မူရင်းဆောင်းပါး ဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။.
Labels: Albania, mm, အဲလ်ဘေးနီးယား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု၏ နောက်ကွယ်မှ ပဟေဠိ ကွင်းဆက်များ (အပိုင်း – ၁)
" ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း, နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု, အတွင်းဝန်ရုံး, အာဇာနည်, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအဝင် အာ ဇာနည် ခေါင်းဆောင်များ၏ လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့တိုင် ပြည့်စုံသော သမိုင်း မှတ်တမ်းကို နိုင်ငံ တော် အဆင့်မှ ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိ " [ စာရေးသူသည် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကာလတွင် BBC နှင့်ဆက် သွယ်၍ သတင်းများကို ပေးပို့ခဲ့ သောကြောင့် စစ်အစိုးရက ထောင်ချခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လတွင် နောက်ဆုံး အကြိမ် ထောင်မှ ပြန်ထွက်လာသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး သမိုင်းဆိုင် ရာ သုတေသန ပြုစုချက်များ ရေးသားနေသည်။ ] ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၇ မိ နစ် ဝန်းကျင်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းဝန်များရုံး အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံခံရစဉ်အချိန်က ဤစာရေးသူသည် လသားခန့်အရွယ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာသမား လူကြီးများ၏ တဆင့်ပြောကြားချက်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် သတင်းစာဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုလေ့လာချက်အရသာ ဤနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးအကြောင်းကို သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကြံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများလည်း ငယ်စဉ်ကလေးဘဝက ကြားခဲ့ဘူးသည်များလည်း ရှိခဲ့ပါ၏။
Labels: mm, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း, လုပ်ကြံခံရမှု
ဒေါက်တာမောင်မောင် ရေးခဲ့တဲ့ ဦးရာရှစ်အကြောင်း
စက်တင်ဘာ၊ ၂၁ ၊ ၂၀၁၂
Source: ၁၉၅၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် အမှတ်စဉ်(၁၄)မှ ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ THE GUARDIANမှ (Profile-U RASCHID)
ဒီနေ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂလို့ အော်နေတဲ့လူတွေ သမဂ္ဂသမိုင်းကိုရော သိကြရဲ့လား။ RUSU (RANGOON UNIVERSITY STUDENTS UNION) စတင် ဖြစ်ပေါ်လာတာက ဗမာမွတ်စလင်က စတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပထမဆုံးက ၁၉၃ဝခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အခြေခံအုတ်မြစ်ချရန် အဖြစ်အပျက်ပင်ဖြစ်သည်။ အော့စဖို့(ဒ်) တက္ကသိုလ် (Oxford University)နှင့် ကဲမ်ဘရစ်(ဂျ်) တက္ကသိုလ်(Cambridge University) တို့နည်းတူ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရန် ကျောင်းသားထု အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ကာ ကျောင်းသားများသည် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စကားရည်လုပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အားကစား၊ အနုပညာဆိုင်ရာနှင့် ပြဇာတ်ဆိုင်ရာ အားပေးမှုအပြင် အခြားလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ကြရန် ဖြစ်သည်။
Labels: mm, ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ, ဦးရာရှစ်
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားလက် မှတ်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု စိစစ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကြောင်း တစေ့တစောင်း
တိုင်းပြည် / နိုင်ငံဟူသည် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း နယ်နိမိတ်၊ မှီတင်းနေထိုင်သော ပြည်သူနှင့် အုပ်ချုပ်သူ အစိုး ရ စသည့် လက္ခဏာ(၃)ရပ်နှင့် ပြည့်စုံစွာ ဖွဲ့တည် ထားသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု၊ အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ဖြစ် ပါသည်။
Labels: ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားဉပ‌ဒေ, 2019, Law, mm
အာမေနီးယားနဲ့ အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ နဂိုနို - ကာရာဘတ် နယ်မြေ အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးရေး လက်မခံ
နဂိုနို - ကာရာဘတ်မှာ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း အဆိုးဆုံးသော တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြ‌စ် နေနေ
ဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ အာမေးနီးယားနိုင်ငံတို့ နယ်မြေ အငြင်းပွားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆယ်စုနှစ်တွေ အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာကို အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးရေး အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို နှစ်နိုင်ငံစလုံးက လက်မခံဘဲ ရှိနေပါတယ်။
ဥရောပ အရှေ့တောင်ပိုင်းက နဂိုနို - ကာရာဘတ် ဒေသအရေး တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ် နဲ့ ရုရှားတို့က ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဇာဘိုင်ဂျန်ရဲ့ မဟာမိတ် တူရကီကတော့ အပစ်ရပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာတွေကို ပယ်ချပါတယ်။
Labels: 2020, History, mm, နဂိုနို - ကာရာဘတ်, သမိုင်း, အဇာဘိုင်ဂျန်, အာမေနီးယား
ရိုဟင်ဂျာ Rohingya ( မှတ်မှတ်သားသား )
ဦးနုက သူမဲရဖို့အတွက် ရို တွေကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ , ဦးနုခေတ်က လွတ်လပ်တဲ့ ပါလီ မန် ဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်တယ် . ဆိုတော့ကာ ပါလီမန်မှာ ရို တွေကို တိုင်းရင်းသားပေးလို့ ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရှိခဲ့ရင် သက်သေထုတ်ပေးပါ ...
နောက်တစ်ချက် , ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော်မှာလည်း ရိုတိုင်းရင်းသား အမတ်ပေါင်း4ယောက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့လို့ ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားရှိခဲ့ရင် သက်သေထုတ်ပေးပါ ..
နောက်တစ်ချက် ရှမ်းလူမျိုး သမ္မတကြီးစဝ်ရွှေသိုက်က ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ရင် တို့ရှမ်းတွေလည်း တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါလို့ ကမ္ဘာသိပြောခဲ့တဲ့အချိန်က ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ရင် သက်သေပြပေးပါ ..
Labels: mm, Rohingya